क्विकस्यान्ड हो र यसको खतराहरू के हुन् | नेटवर्क मौसम विज्ञान
पक्कै पनि तपाईंले असंख्य फिल्महरूमा नायकहरू डुब्दा देख्नु भएको छ एरेनास मोडेइजास। जब तपाईं क्विक्यान्डका बारे कुरा गर्नुहुन्छ तपाईं त्यस्ता क्षेत्रका बारे सोच्नुहुन्छ जहाँ बालुवा डुब्न सक्छ र तपाईं यसबाट उम्कन असक्षम हुनुहुन्छ। अन्तमा तपाईं डुब्न समाप्त। त्यहाँ केहि दृश्यहरू छन् जुन एकदम नाटकीय छन्, त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले आश्चर्यचकित गर्छन् कि यथार्थमा क्विक्सेन्ड अवस्थित छ र यदि उनीहरूमा त्यो खतरा छ कि उनीहरूले संकेत गरे।
तसर्थ, हामी यस लेखलाई समर्पित गर्न गइरहेका छौं Quigsand के हो र यसको विशेषताहरू र सम्भावित खतरहरू के हुन् भनेर वर्णन गर्न।
1 क्विकसन्ड के हो?
2 क्विकस्यान्डबाट कसरी बाहिर निस्कने
3 तिनीहरू कहाँ छन्
क्विकसन्ड के हो?
केहि विशिष्ट स्थानहरुमा र टेर्रेनहरु मा अधिक उनीहरु लाई यो ग्रह मा अनुकूल छ, हामी quicksand पाउन सक्छौं। यो एक खतरा हो जुन हामी कहाँ छौं र यसका विशेषताहरुमा निर्भर गर्दछ। Quicksand भौतिकी एक कोलोइड तरल पदार्थ को रूप मा परिचित छ। एक कोलाइड तरल पदार्थ एक पदार्थ हो जुन दुबै तरल र ठोसको रूपमा कार्य गर्न सक्षम छ। तिनीहरूसँग एकै समयमा दुबैका विशेषताहरू हुन सक्छन्।
तपाईं भन्न सक्नुहुनेछ कि एक तरल पदार्थ के हो जुन दुबै तरल र ठोस कणहरू मिलेर बनेको छ जुन दुबै तरिकाहरूमा कार्य गर्दछ र त्यसमा निश्चित जोखिमहरू हुन सक्छन्। यो भूभाग हो कि पहिलो हेराईमा तिनीहरू ठोस र स्थिर देखिन्छन्, यसले व्यक्तिलाई पासोमा पार्नको लागि प्रशस्त मात्रामा चिपचिपेपन हुन सक्छ। प्रतिरोधको रूपमा जित्न सक्ने भन्दा बढी तौलको कुनै वस्तु यसमा फस्नेछ।
क्वाइक्सेन्डको मौलिक पक्ष भनेको भूभाग हो जुन दुबै बालुवा, दलदल, माटो, पानी माटो वा बालुवा दुवै नग्न आँखाको साथ सतहमा हुन सक्छ। यसलाई पातले ढाक्न वा साधारण पोखर जस्तो देखिन्छ। यो सबै यस विशिष्ट quicksand को विशेषताहरु मा निर्भर गर्दछ। यी जमिनहरूको समस्या जहाँ क्विकस्याण्ड सामान्यतया अवस्थित हुन्छ, यो पानी र एक धेरै राम्रो ठोस पदार्थले बनेको हुन्छ जसले जेली जस्तो कार्य गर्दछ। यी सामग्रीहरू स्थिर रहन्छन् जबसम्म तिनीहरूमा कुनै खास बल प्रयोग हुँदैन।
उदाहरण को लागी, हामी देख्न सक्छौं कि पात र अन्य प्रकाश निकायहरूले क्वाइक्सेन्डको अवस्था परिवर्तन गर्दैन। यसको मतलब यो हो कि तिनीहरू केहि वस्तुहरू वा कम वजनका जनावरहरूलाई समर्थन गर्न सक्षम छन्। अर्कोतर्फ, जनावर वा व्यक्ति जस्ता विशाल आकारको केहि यी आधारहरूमा हिंड्न सक्दैन किनकि यसले तिनीहरूलाई डुबाउन थाल्छ। यो घट्छ किनकि ठूला व्यक्ति वा जनावरसँग सामग्रीहरु भन्दा घनत्व धेरै हुन्छ जुन quicksand बाट बनेको हुन्छ।
क्विकस्यान्डबाट कसरी बाहिर निस्कने
एउटा ठूलो जोखिम बाहिर निस्कनको कुनै अवसर बिना फँस्नु हो। यी के चलचित्र र कार्टुनहरू दिइन्छ। यी क्षेत्रहरूले स that्केत गर्दछन् कि बाहिर निस्कनको लागि अत्यधिक बल प्रयोग गर्न आवश्यक छ यो आन्दोलनबाट सार्न वा भाग्नु हुँदैन जुन तपाईं समातिन्छ। शरीरको आफ्नै वजनले यसलाई तान्न बनाउँछ। यसले ठूलो खतरा निम्त्याउँछ किनकि बालुवा पूर्ण रूपमा शोषण गर्ने मानिस, जनावर वा ठूला वस्तुहरू जस्तै मृत्युमा पुर्‍याउने सवारीको अन्त्य गर्न सक्दछ। मृत्यु डुब्न लाग्छ।
त्यसकारण, क्विकस्यान्ड धेरै खतरनाक इलाका मानिन्छ र जहिले पनि टाढा बस्नुपर्छ। तपाईं धेरै धेरै सवारीसाधन खाँदै हिड्दै हुनुहुन्छ, यस प्रकारको भूभागबाट अलग रहनु उत्तम हो। यदि तपाईं क्विकस्यान्डको साथ जमिनमा खस्नुभएको छ भने, तपाईंले गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अचानक आन्दोलनहरू नगर्नु हो। यो तरल पदार्थ मा अधिक दबाबको कारण एक छिटो डूब गर्न नेतृत्व गर्दछ। यो अझै पनि सकेसम्म रहन को लागी गती र डूब गर्न को लागी सल्लाह दिईन्छ वा तपाईको पछाडि झुण्ड्नुहोस् यदि तपाईं यस शोषण प्रक्रियालाई कम गर्न चाहानुहुन्छ।
बाहिर जान सक्षम हुनको लागि यसलाई पौडी खेल्न समान तरिकाले गर्नुपर्दछ। सबैभन्दा ठूलो सम्भावित आवेगको साथ तपाईं पछाडि उफ्रनु पर्छ आफ्ना हातहरू विस्तार गरेर। लक्ष्य तपाईं रहन को लागी छ तपाईंको पीठमा यथासम्भव ढल्काइ रहेको छ ताकि शोषणको गति कम छ। यस स्थितिले हाम्रो शरीरमा प्रेशरलाई कम गर्न र पछाडिको सम्पूर्ण सतहमा वजन वितरण गर्न सहयोग गर्दछ। यसले तपाईंलाई यी क्षेत्रहरूबाट सजीलै बाहिर जान अनुमति दिन्छ। यस स्थितिबाट, जब हामी हाम्रो पछाडि पौडी खेल्दै गरेको जस्तो आन्दोलन गर्नु पर्छ।
यद्यपि यो केवल ती क्षेत्रहरूमा गर्नुपर्दछ जहाँ हामीसँग बाह्य मद्दत छैन। यदि हामी एक्लै छौं वा केही व्यक्ति वा जनावर छैन जसले हामीलाई मद्दत गर्न सक्छ, हामी यो गर्नेछौं। यसलाई डोरीमा डोरी प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ र पशुलाई क्विज्याण्डमा सुरक्षित गर्न यसलाई बाहिर तान्न सकिन्छ।
यस संसारमा शिफ्टि sa बालुवाहरू कहाँ पाइन्छन् भन्ने बारेमा त्यहाँ धेरै शंकाहरू छन्। सब भन्दा साधारण प्रश्न मध्ये एक हो कि तिनीहरू मरुभूमिमा अवस्थित छ कि। हामीले एक क्विक्सन्ड फेला पार्दा ध्यानमा लिनु पर्ने एउटा पक्ष यो हो कि यसलाई प्रशस्त पानीको क्षेत्र चाहिन्छ। यसका लागि नदीहरू र समुद्री किनारका नजिकको दलदल क्षेत्रहरू आवश्यक छ। यो सम्भव छैन कि उजाडस्थानमा पट्टि छन्। त्यहाँ तरल पदार्थको लागि यथेष्ट पानी छैन यी अद्वितीय विशेषताहरू सिर्जना गर्न।
एक ठाउँ जहाँ यो सामग्री भेट्टाउन सकिन्छ नदिको मुख। केहि तालहरू स्ट्रिमहरूमा जस्तै फेला पार्न सकिन्छ। यो तथ्य यो छ कि त्यहाँ धेरै मात्रामा तलछटहरू छन् जुन धेरै राम्रा बालुवा मिलेर बनेको छ र पानीले भरिएको छ। यो सामान्य हो कि यी सामग्रीहरू सँगै मिलेर क्वाइक्सेन्ड टेर्रेनहरू बन्न सक्छ जुन सहजै बाथर्स समात्न समात्दछ।
यी ठाउँहरूमा नफस्नको लागि बेवास्ता गर्न सकिने अर्को ठाउँहरू दलदल र जलाशयको दलदल र माटो हो। यी माटोहरूले त्यस्तै प्रकारले कार्य गर्न सक्दछन् किनकि तिनीहरू माटोको बालुवाबाट बनेका छन् र ठूलो मात्रामा पानीको साथ। अन्तमा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यदि तपाईं यी क्षेत्रहरू मध्ये कुनै एकमा झर्नुभएको छ भने धैर्य हुनु र नडराउनु हो। यसले तपाईलाई बढि विरक्त गतिविधिहरु बनाउँदछ।
म आशा गर्दछु कि यस जानकारीको साथ तपाईले quicksand को बारे मा अधिक जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Divulgation » क्विकस्यान्ड
जुआन क्याम्पस भन्यो
सबैको लागि ठूलो जानकारी।
JUAN CAMPOS लाई जवाफ दिनुहोस्
चाखलाग्दो जानकारी !!